Heavy Adidy Lathe Manufacturers & Suppliers | China Heavy Duty Lathe Factory
MAVESATRA DUTY LATHE milina MAMPIAVAKA: lathes afaka manatanteraka ireo, mba hiala farany-tarehy, sy ny faritra cylindrical anatin'ny lavaka ny faritra isan-karazany ary koa ny mimetatra, santimetatra, Module sy dity threads.The ambony tsary azo miasa tsirairay amin-kery noho ny fanapahanao fohy ambonin'ny taper . Long taper surface azo niova ho azy amin'ny alalan'ny hetsika iombonana amin'ny natambatra longitudinal fahana amin'ny tampony tsary fahana ...
MAVESATRA DUTY LATHE MAMPIAVAKA: 103C andian-dahatsoratra marindrano lathe andian-dahatsoratra ity dia marindrano lathe-baovao natao vokatra, izay mifototra amin'ny andian-dahatsoratra 63C lathe araka ny fangatahan'ny ny tsena. Ny lathe indrindra mety ho machining hazavana-adidy lehibe ny asa kapila farantsa sy ny savaivony lavaka lehibe ao anatin'izany asa pieces.It: CW61 / 2103C, CW61 / 2123C, CW61 / 2143C, CW61 / 2163C, CW61 / 2183C.The lavitra eo foibe a. ..
MAVESATRA DUTY LATHE milina MAMPIAVAKA: lathes afaka manatanteraka ireo, mba hiala farany-tarehy, sy ny faritra cylindricl anatin'ny lavaka ny faritra isan-karazany ary koa ny mimetatra, santimetatra, Module sy dity threads.The ambony tsary azo miasa tsirairay amin-kery noho ny fanapahanao fohy ambonin'ny taper . Long taper surface azo niova ho azy amin'ny alalan'ny hetsika iombonana amin'ny natambatra longitudinal fahana amin'ny tampony-tsary fahana, ...
Sheet Metal Machines , hiondrika Machine , Lathe , Metal Lathe , marindrano Lathe , Lathe Machine ,